विन्दास कंगनाको रोमान्टिक कुरा | Samabesi Khabar
विन्दास कंगनाको रोमान्टिक कुरा
त्यसो त बलिउडमा कंगनाको दुई रुप छ । एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री, दुई कन्ट्रोभर्सी क्विन । उनी यस्ती अभिनेत्री हुन्, जसले सिंगो फिल्म बोक्ने सामथ्र्य राख्छिन् । अभिनेताले भन्दा बढी पारिश्रमिक माग गर्छिन् । उनको फिल्मले राम्रै हलचल पनि मच्याउँछ ।
यद्यपी उनी विवादित पनि छिन् । उनी विवादको घेराबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दिदनन् । यी कन्ट्रोभर्सी क्विन अहिले चाहि के गर्दैछिन् त ?
हालै मात्र बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौट तथा राजकुमार रावको फिल्म ‘जजमेन्टल है क्या’ को टे्रलर सार्वजनिक भयो, जसलाई निकै मन पराइयो । आफ्ना विन्दास बयानका कारण चर्चामा आइरहने कंगनाले भाइ-भतिजावाददेखि राजनीतिक बुझाइको कमिको मुद्दामा सार्वजनिक रुपमै करण जौहर, रणबीर कपूर तथा आलिया भट्टसमेत बलिउडका थुप्रै दिग्गज व्यक्तित्वका विरुद्ध बोलिसकेकी छिन् ।
अभिनेता रितिक रोशनसंगको सार्वजनिक विवादको खबरले पनि चर्चा बटुल्यो । हालै उनलाई आगामी दिनमा अन्य व्यक्तिका बारेमा पनि बोल्ने हो त ? भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । जसको जवाफमा कंगनाले यस सम्बन्धमा आफ्नो बेग्लै धारणा रहेको बताइन् ।
आफ्नो नयाँ फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गर्ने समारोहमा कंगना भन्दै थिइन्-‘म कसैको पनि पर्दाफाश गर्न गैरहेकी छैन । कतिपय अवस्थामा मानिसहरु आफैंले आफूलाई बेनकाव गरिदिन्छन् । म यसलाई निकै हल्का रुपमा लिन्छु ।
कंगना र रितकले एक-अर्कालाई सन् २०१६ मा कानूनी नोटिस पठाएका थिए । कंगनाको दावी के थियो भने उनीहरु दुबै सम्बन्धमा थिए र रितिकले उनीसंग विवाह गर्ने वचन दिएका थिए । रितिकले यो कुरालँई ठाडै अस्विकार गरिदिए । उनले दुबैले संगै काम मात्र गरेको बतँए । रितिकले त उक्त कुराका लागि कंगनाले आफूसंग सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने कुरा समेत बताए ।
कंगनाको भनाइ के छ भने भन् २०१६ र २०१७ का बीचको त्यो अवधि उनका लागि निकै कष्टकर थियो, जतिबेला उनले बेइज्जती सहनु पर्यो र मानसिक रुपले अस्थिर भएको आरोप सुन्न पर्‍यो ।
कंगनाका अनुसार कनिका ढिल्लो -लेखिका) ले उनलाई जज मेन्टल है क्या फिल्ममा उनले निर्वाह गर्ने भूमिकाका बारेमा बताइन्, त्यो बेला उनलाई उक्त कथा आफ्नै जस्तो लागेको थियो । ‘यदि मेरो जीवनमा त्यो क्ष्ँण नआएको भए र मैले यो कथा नसुनेको भए मलाई कुनै युवती मानसिक रुपले अस्थिर भनिन्छ भन्ने कुरा मुद्दा बन्छ जस्तो लाग्दैन थियो, कंगनाको भनाइ छ ।
कंगनाको उक्त फिल्मको नाम प्रँरम्भमा मेन्टल है क्या थियो । यद्यपि इन्डियन साइकियाटि्रक सोसाइटीका सदस्यहरुद्वारा उक्त नामलाई लिएर आपत्ति जनाइएपछि फिल्मका निर्माता बालाजी टेलिफिल्म्ले यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘जजमेन्टल है क्या’ राखे ।
यो फिल्म २६ जुलँईका दिन प्रदर्शन हुँदैछ ।
‘अर्जुन रेड्डी’को नेपाली रिमेकमा कलाकारको खोजी
अभिनेत्री करिना कपूरले दोस्रो सन्तान जन्माइन्
‘धोनी’मा सुशान्तको साथी बनेका अभिनेता सन्दीप नाहरद्वारा आत्महत्या
दर्जनभन्दा बढी कलाकार कांग्रेसमा प्रवेश गरे
आमिर खानकी छोरी इराले स्विकारिन् सम्बन्ध, प्रेमी नुपुरसँग सेयर गरिन् रोमान्टिक फोटो